वैशाख ९ बाट एसईई, कसरी हुन्छ यो पटकको परीक्षा ? – Annapurna Post News
April 17, 2022 sujaLeaveaComment on वैशाख ९ बाट एसईई, कसरी हुन्छ यो पटकको परीक्षा ?
काठमाडौ । कोरोना महामारीका कारण दुई वर्षदेखि हुन नसकेको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) आगामी वैशाख ९ देखि सञ्चालन हुने भएको छ ।
शैक्षिक सत्र २०७७ र २०७६ मा कोरोना महामारीका कारण विद्यालयले गरेको आन्तरिक मूल्यांकनकै आधारमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले एसईईको नतिजा सार्वजनिक गरेको थियो ।
यसपालि बोर्डले तयार पारेको प्रश्नपत्रको आधारमा देशभरका २ हजार ७ परीक्षा केन्द्रमा दुई वर्ष पहिलेको जस्तै एसईई सञ्चालन हुने बोर्डले जनाएको छ ।
परीक्षामा ५ लाख १४ हजार ७ सय ६० जना सहभागी हुनेछन् । प्रश्नपत्र, उत्तरपुस्तिकालगायत परीक्षा सामग्री ७७ वटै जिल्लामा पुगिसकेको एसईईका परीक्षा नियन्त्रक अर्जुन रायमाझीले जानकारी दिनुभयो ।
‘केन्द्राध्यक्ष नियुक्त गरेर प्रशिक्षणको काम भइरहेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो । परीक्षामा देशभरका ११ हजार ६ सय १५ विद्यालयका विद्यार्थी सहभागी हुँदै छन् । एसईईमा नेपालीले जापानमा सञ्चालन गरेको एक विद्यालयका २० विद्यार्थी पनि सहभागी हुनेछन् ।
नियमिततर्फ ४ लाख ८८ हजार ७ सय ४२ र ग्रेड वृद्धितर्फ ११ हजार ४ सय ५४ विद्यार्थी सहभागी हुने परीक्षा नियन्त्रक रायमाझीले जानकारी दिनुभयो । ग्रेड वृद्धि परीक्षा दिने विद्यार्थी दुई वर्षअघिका हुन् ।
गत दुई वर्ष आन्तरिक मूल्यांकनका आधारमा नतिजा प्रकाशन गर्दा ग्रेड वृद्धिको अवसर दिइएको थिएन । प्राविधिक धारमा कक्षा सञ्चालन गरिरहेका मुलुकभरका २ सय ९९ वटा विद्यालयका १४ हजार ५ सय ६४ विद्यार्थीले पनि एसईई दिँदै छन् ।
प्रदेशस्थित सामाजिक विकास मन्त्रालय र जिल्ला परीक्षा समन्वय समितिको व्यवस्थापनमा एसईई सञ्चालन गर्न लागिएको बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्माले बताउनुभयो ।
‘प्रश्नपत्र केन्द्रले तयार पारेर जिल्लामा पठाएको छ, परीक्षा सञ्चालन र उत्तरपुस्तिका परीक्षणको काम प्रदेशको समन्वयमा हुन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रदेशले विद्यार्थीको प्राप्तांक पठाएपछि रुजु गरेर बोर्डले नतिजा प्रकाशन गर्छ ।’
साउन १ देखि कक्षा ११ को शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअघि नै एसईईको नतिजा सार्वजनिक गरिसक्ने लक्ष्य लिएको उहाँले बताउनुभयो । ‘विगतमा भन्दा एक महिना ढिला परीक्षा सुरु हुन लागेको छ तर पनि कक्षा ११ को नयाँ शैक्षिक सत्रमा असर नपुगोस् भनेर सचेत छौं,’ उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
गत वर्ष शैक्षिक सत्रको सुरुवातमा कोरोना महामारीको तेस्रो लहरले पठनपाठन प्रभावित भएकाले चैत महिनाभर कक्षा सञ्चालन गर्ने र वैशाखमा परीक्षा तथा भर्ना अभियान सञ्चालन गरेर जेठ १ देखि कक्षा १–१० को आगामी शैक्षिक सत्र सुरु गर्ने शिक्षा मन्त्रालयको तयारी छ ।
एसईईको नतिजा मुलुकभर एकैपटक सार्वजनिक गर्ने वा प्रदेशगत रूपमा गर्ने भन्ने निष्कर्षमा पुगिनसकेको बोर्डका अध्यक्ष शर्माले बताउनुभयो  ।
‘कुनै प्रदेशले चाँडो उत्तरपुस्तिका परीक्षण गरेर पठाउँछ भने पहिल्यै नतिजा प्रकाशन गर्न पनि सकिन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिलेसम्म एकै पटक नतिजा सार्वजनिक गर्ने प्रचलन रहेकाले के गर्ने निर्णय भइसकेको छैन ।’
प्रदेशले परीक्षा सञ्चालनपछि उत्तरपुस्तिका परीक्षण, सम्परीक्षणको काम सकेर बोर्डमा पठाउने जिम्मेवारी दिएको छ । प्रदेशले बोर्डको प्रदेश कार्यालयको समन्वयमा परीक्षाका काम गर्नेछन् ।